Hitsin-dàlana sy alàlan'ny fikarohana ao amin'ny Google | Martech Zone
Hitsin-dàlan'ny Google Search sy ny Parameter
Talata, Oktobra 5, 2021 Talata, Oktobra 5, 2021 Douglas Karr
Androany, nitady infografika tao amin'ny tranonkalan'i Adobe aho ary tsy ny zavatra notadiaviko no vokany. Raha tokony handeha amin'ny tranokala iray ary avy eo hikaroka ao anaty dia saika hampiasa hitsin-dalana Google foana amin'ny tranokala fikarohana aho. Io dia tena mora ampiasaina - na mitady quote aho, na fehezan-dalàna, na filetype manokana.
Amin'ity tranga ity, ny fikarohana voalohany dia:
Ity valiny ity dia manome ny pejy rehetra amin'ny subdomain Adobe rehetra izay misy ny teny Sary torohay. Izany dia nitondra pejy an'arivony avy tamin'ny tranokala sary an'ny Adobe ka nila nesoriko io subdomain io tamin'ny valiny:
Nesoriko ny subdomain manokana tamin'ny alàlan'ny Miiba sonia miaraka amin'ilay subdomain nesoriko. Mila mitady filetype manokana aho… rakitra png:
Ireo dia hitsin-dàlana mahasoa rehetra mba hikarohana tranokala manokana… fa ho gaga ianao amin'ny fomba hafa ahafahanao mikendry ny fangatahanao.
Ahoana ny fikarohana tranokala manokana miaraka amin'i Google
toerana: Fikarohana ao anaty tranokala na sehatra manokana. -site: manilika domain na subdomain
Ahoana ny fomba hikarohana sehatra media sosialy miaraka amin'i Google
Ampiasao ny marika @ hitady sehatra media sosialy (aza hadino ny mametraka ny sehatra sosialy amin'ny farany).
Ahoana ny fomba hikarohana karazana rakitra manokana miaraka amin'i Google
karazana rakitra: Mikaroka karazana rakitra manokana, toy ny pdf, doc, txt, mp3, png, gif. Azonao atao ny manilika amin'ny -filetype.
Ahoana ny fomba hikarohana lohanteny miaraka amin'i Google
hanisy lohateny: Mitady teny manokana ao anatin'ny lohatenin'ny pejin-tranonkala fa tsy ny pejy iray manontolo. Azonao atao ny manilika amin'ny -intitle.
inposttitle: Mitady teny manokana ao anatin'ny lohatenin'ny lahatsoratra bilaogy. Azonao atao ny manilika amin'ny -inposttitle.
allintitle: Mikaroha fehezanteny iray manontolo ao anaty lohateny. Azonao atao ny manilika amin'ny -allintitle.
Ahoana ny fikarohana ao amin'ny URL iray miaraka amin'i Google
allinurl: Mikaroha fehezanteny iray manontolo ao anatin'ny teny URL. Azonao atao ny manilika amin'ny -allinurl.
inurl: Mikaroha teny ao anaty URL. Azonao atao ny manilika amin'ny -inurl.
Ahoana ny fomba hikarohana ao amin'ny lahatsoratra misy ny vatofantsika Google
allinanchor: Mikaroha fehezanteny iray manontolo ao anatin'ny vatofantsoran'ny sary. Azonao atao ny manilika amin'ny -allinanchor.
inanchor: Mitady teny ao anatin'ny vatofantsika misy ny sary. Azonao atao ny manilika amin'ny -inanchor.
Mpikirakira fikarohana lahatsoratra miaraka amin'i Google
Ampiasao ny * anelanelan'ny teny ho toy ny wildcard hikarohana ny fitambarana rehetra.
Ampiasao ny mpandraharaha OR eo anelanelan'ny teny hitady ireo teny roa ireo.
Ampiasao ny mpandraharaha AND eo anelanelan'ny teny hitadiavana ireo teny rehetra.
Ampiasao * ho toy ny wildcard hahitana teny misy litera na teny eo anelanelany
Ampiasao ny ~ alohan'ny teninao hahitanao teny mitovy amin'izany. Amin'ity tranga ity dia hiseho ihany koa ireo teny toa ny oniversite:
Manilika ireo teny miaraka amin'ny marika minus
Mitadiava teny na andian-teny marina amin'ny alàlan'ny fametrahana azy ireo amin'ny teny nalaina
Tadiavo ao anaty valiny tokana ny teny rehetra. Azonao atao ny manilika amin'ny -allintext.
Tadiavo ao anaty valiny tokana ny teny rehetra. Azonao atao ny manilika amin'ny -intext.
Mitadiava teny mifanakaiky ao anaty teny maromaro
Azonao atao koa ny manampy fampifangaroana bebe kokoa amin'ny fikarohana mba hampiditra sy hanilihana ireo teny, andian-teny, domains sns sns. Azonao atao koa ny manilika amin'ny fampiasana ny marika hampihenana amin'ny fikarohana nataonao.
Valiny haingana amin'ny alàlan'ny Fikarohana Google
Google koa dia manolotra fiasa hafa izay tena manampy:
Ranges isa, daty, data na vidiny mampiasa ..
Weather: Mitady Weather hahita ny toetrandro amin'ny toerana misy anao na manampy anaran'ny tanàna.
Rakibolana: Ataovy hamaritra manoloana ny teny rehetra hahitana ny famaritana azy.
Kajy: Ampidiro ny fampitahana matematika toy ny 3 * 9123, na mamaha ny fampitoviana graphing sarotra toy ny +, -, *, /, ary ny teny trigonometry toy ny cos, sin, tan, arcsin. Zavatra iray mora ampiasaina amin'ny kajy Google dia ny ahafahanao mampiasa isa marobe… toy ny 3 trillion / 180 tapitrisa ary mahazoa valiny marina. Mora kokoa noho ny miditra amin'ireo zerôs rehetra amin'ny calculeranao!
isan-jato: Azonao atao koa ny manisa isan-jato amin'ny alàlan'ny fidirana% amin'ny:
Fiovan'ny singa: Ampidiro izay fiovam-po.
Sports: Mikaroha ny anaran'ny ekipanao hahitanao fandaharam-potoana, isa na lalao ary maro hafa
Fiadanan'ny sidina: Ampidiro ao ny nomeraon-sidinao feno ary alao ny sata farany
Movies: Jereo hoe inona no milalao eo an-toerana
Zava-misy haingana: Mikaroha anaran'olona malaza, toerana, sarimihetsika na hira hahitana fampahalalana mifandraika amin'izany
Tags: Googlegoogle manisa isan-jatokajy googlerakibolana googlefikarohana domain googlegoogle manilikagoogle sidina sidinasarimihetsika googlegoogle zava-misy hainganagoogle rangesgoogle searchgoogle domain fikarohanahitsin-dàlana amin'ny fikarohana googlefikarohana amin'ny tranokala googlefizahana fanatanjahantena googlegoogle trigonometrikafiovan'ny singa googlefikarohana wildcard googleintxt
Jun 25, 2013 ao amin'ny 12: 15 PM
lahatsoratra mahafinaritra - misoratra anarana amin'ny rss izao 🙂